राउटेमाथि बढ्दै लगानी, घट्दै जनसंख्या- फिचर - कान्तिपुर समाचार
राउटेमाथि बढ्दै लगानी, घट्दै जनसंख्या
राहतका नाममा नगद दिँदा राउटेको जीवनशैली बिग्रियो
मद्यपानका कारण पछिल्लो ६ महिनामा ८ जना राउटेले ज्यान गुमाए
आश्विन १५, २०७८ गणेश राई, ज्योति कटुवाल
काठमाडौँ,सुर्खेत — भदौ तेस्रो साता जनजाति प्रतिष्ठानले सुर्खेतको बोटेचौरमा बसिरहेका राउटे समुदायलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, लत्ताकपडा वितरण गर्‍यो । राहत वितरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति थियो । प्रतिष्ठान पुग्नुअघि भदौ १३ गते राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना नेतृत्वको टोलीले सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा रहेको राउटे बस्तीको अनुगमन गर्‍यो । यो अनुगमनमा पनि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिदेखि स्थानीय तहका निर्वाचित अधिकारीसहितको टोली थियो ।
झलक्क हेर्दा एक साताको अन्तरमा लोपोन्मुख जनजातिको सूचीमा रहेका राउटेको बस्तीमै सहयोग र अनुगमनका नाममा दुई टोली पुगेबाट यो समुदायप्रति जिम्मेवार निकायको चासो र चिन्ता कति रहेछ भनेर बुझाउँछ । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने अनेकन सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको चासोका बाबजुद पनि राउटे समुदायमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । बरु उल्टै उनीहरूको संख्या घटिरहेको छ । उनीहरूको परम्परागत जीवनशैली र संस्कृतिमा बाह्य प्रभाव बढिरहेको छ । राउटेको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि एकीकृत नीतिको अभावमा कनिका छरेजस्तो पैसा बाँड्ने काम मात्रै भएको छैन, उनीहरूको समुदायमै पुगेर बारम्बार हस्तक्षेप पुग्ने खालका गतिविधि पनि बढिरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीमगरले जनप्रतिनिधिको रोहबरमा आफूहरूले सल्यान–सुर्खेत सीमा क्षेत्रको सडकछेउका जंगलमा रहेका राउटे बस्तीमा राहत बाँडेको बताए । उनले भने, ‘चाडबाड पनि नजिकिँदै आयो, राउटे बस्तीमा खाद्यान्नको अभाव भएको कुरा सुनियो अनि हामी पुग्यौं ।’ राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष राउटे बस्ती पुग्दा उनको साथमा प्रदेश प्रतिनिधि र गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि थिए । अनुगमन टोलीमा रहेकी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाले आफूहरूले तेस्रो पटक राउटे बस्ती अवलोकन गरेको बताउँदै भनिन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत हातैमा पैसा लियो, रक्सी खायो । अरू मान्छे गएर पनि त्यसरी नै नगद दिएर बानी बिगारिदिएका रहेछन् ।’ यो भ्रमण टोलीले राउटेका छाप्रामा फ्लेक्स बोर्ड टाँगेर फोटो खिचायो । जुन फोटोमा राउटेका छोराछोरीहरू अर्धनग्न देखिन्छन् ।
फिरन्ता राउटे जातिको दैनिकीलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निगरानी राख्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकायको संयुक्त सहभागितामा यसअघि समिति बनेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले ‘राउटे नीति’ को मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ । तर यतिका धेरै प्रयासबाट राउटेहरूले के पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न भने जीवितै छ ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि राउटे समुदायका लागि स्थायी परिचयपत्र वितरण गर्‍यो । तर, राउटेले लिन मानेनन् । ‘हामीलाई भत्ता दिए भइहाल्छ, यो (परिचयपत्र) दिन पर्दैन,’ उतिखेर मुखिया वीरबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘पैसा पाए चामल, खसी किनौंला, यसले केही किन्न मिल्दैन ।’ अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गुराँस गाउँपालिकामा रकम पठाउने गरेको छ ।
सरकारी तवरबाट होस् वा गैरसरकारी, राउटेलाई सोझै नगद दिने र उनीहरूको बस्तीमै पुगेर खाद्यान्नलगायतका सामग्री बाँड्ने निकायबीच समन्वय देखिन्न । स्थानीय तहका अलावा राउटेलाई कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता लिने राउटेको संख्या १ सय ५२ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सोही संख्याका राउटेलाई भत्ता बाँडियो । तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भत्ता बुझ्ने राउटेको संख्या घटेर १ सय ४७ पुग्यो । उनीहरूलाई पहिलो चौमासिकमा प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँकै दरले भत्ता दिइयो भने दोस्रो चौमासिकबाट भत्ता रकम बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिन थालिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारका तर्फबाट मासिक ४ हजार र प्रदेश सरकारले थप २ हजार गरी मासिक जनही ६ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा भएको छ । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा राउटेको जनसंख्याको आधाभन्दा थोरैले मात्रै सरकारी भत्ता बुझिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्यांकले राउटेको जनसंख्या ६ सय ५८ थियो । जसमा ३ सय ४६ पुरुष र ३ सय १२ महिला थिए । २०६८ को जनगणनामा राउटेको जनसंख्या ६ सय १८ पुग्यो । जसमा ३ सय २० पुरुष र २ सय ९८ महिला छन् । तर पछिल्लो सरकारी आँकडा हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने राउटको संख्या १ सय ४१ मा मात्रै सीमित छ । जसमा तीमध्ये ७५ महिला र बालिका छन् भने अन्य पुरुष । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मद्यपानका कारण मात्र ८ जना राउटेको मृत्यु भएको छ ।
प्राप्त आँकडाअनुसार सरकारी तवरमा मात्रै राउटेलाई वार्षिक १ करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको देखिन्छ । जसमा गैरसरकारी निकायले गरेको खर्च जोडिएको छैन । विभिन्न संघसंस्था, समूह र व्यक्तिले राउटे समुदायलाई देखाएर तथ्यांकविहीन लगानी गर्दै आएको देखिन्छ ।
सरकारी निकायका अलावा कैयन् गैरसरकारी संस्थाले पनि राउटेमाथि लगानी गर्दै आएको देखिन्छ । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेके) नामक गैरसरकारी संस्थाले विगत तीन आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको जनाएको छ । संस्थाले राउटेको स्वास्थ्य हेरचाहका निम्ति एक जना अहेब स्वास्थ्यकर्मीसमेत व्यवस्था गरेको संस्थाका अध्यक्ष हिरासिंह थापाले जनाए ।
प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ १२:१६
एक महिनामै तीन ठाउँ बसाइँसराइ
‘एकै ठाउँमा बसेपछि अन्य समुदायका मान्छेहरुसँग हेलमेल हुन्छ भन्दै छिटो बसाइँ सर्छन्’
असार २४, २०७८ गणेश राई, ज्योति कटुवाल
काठमाडौं/सुर्खेत — जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटेहरू आफ्नो समुदायमा कुनै घटना नघटेसम्म महिना दिनभन्दा बढी एउटै स्थानमा बस्ने गर्छन् । तर, जेठ महिनायता एकै महिनामा तीन स्थानमा बसाइँ सरेका छन् । जेठको अन्तिम सातामा समुदायकै युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार भएपछि उनीहरू एकै महिनामा ३ पटक बसाइँ सर्नुपर्‍यो ।
दैलेखको श्रीस्थान खोलाको किनारामा राउटे समुदाय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
जेठ २१ गते गुर्भाकोट नगरपालिकाको आपसोतीमा राउटे समुदायका दुई युवतीलाई स्थानीय युवकहरूले होटलमा मदिरा खुवाएर यौन दुर्व्यहार गर्नुका साथै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आयो । टिकटक, फोटो र भिडियो बनाउनेको घुइँचो थेग्न नसकेकाले उनीहरू एक महिनामा तीन स्थान बसाइँ सर्न बाध्य भएका हुन् । घटना हुँदा सुर्खेतको गुर्भाकोट–११ भेरी नदी किनारा पारि बस्थे । घटनापछि वारि सरे । असार १० गते सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको कोल्टे जंगलमा बस्न पुगेका छन् । ‘यौन दुर्व्यवहारको घटनापछि राउटेहरूले तीन ठाउँ फेरेका छन्,’ मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाका सूचना अधिकारी किरण बराम भन्छन्, ‘अहिले उनीहरू सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिको कोल्टे जंगलमा छन् ।’
तीन वर्षयता राउटे समुदायमा सहजर्ता भएर काम गर्दै आएकी दुर्गा खत्रीका अनुसार गत वर्षको वैशाखबाट यता २२ स्थानमा सरिसकेका छन् । दुर्व्यवहारको घटनापछि प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका, प्रशासन, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगलगायत निकायले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । फिरन्ते जाति राउटेको जीवनशैलीमाथि बाहिरका अनावश्यक मानिसको जथाभावी प्रवेशलाई निगरानी गर्न प्रशासनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी टोली खटाएको छ ।
‘एकै ठाउँमा बसेपछि अन्य समुदायका मान्छेहरूसँग हेलमेल हुन्छ भन्दै छिटो बसाइ सर्छन्,’ उनले भनिन् । आफ्नो समुदायमा प्रहरी देखेपछि झनै आत्तिएर बसाइँ सरेको हुन सक्ने सहजकर्ता खत्रीको अनुमान छ । एकै ठाउँमा नबस्ने, खेतीपाती नगर्ने र लेखपढ नगर्ने राउटे समुदायको मान्यता छ । पैसा छोएमा पाप लाग्छ भन्ने समुदायमा अहिले पैसाका लागि सम्झौता गर्न तयार भएका छन् । बाह्य समुदायसँग घुलमिल र मदिराको लत नभएको भए यो घटना नघट्ने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा. युवराज लुइँटेल राउटे समुदायले एक महिनामै तीन ठाउँमा सरेप्रति संशय प्रकट गर्छन् । ‘राउटेहरू फिरन्ता हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर राउटेको अनुसन्धानमा संलग्न लुइँटेल भन्छन्, ‘राज्य र अन्य समुदायबाट टाढा रहने उनीहरूको स्वभाव हो । पछिल्लो घटनाले उनीहरूलाई थप तनाव पैदा गरेको हुन सक्छ । नत्र एक ठाउँमा तीन महिनासम्म बसेर अन्यत्र सर्छन् ।’
आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना रानामगर राउटेले परम्परागत जीवनशैलीमा बाँच्न चाहेको बताइन् । ‘राउटे समुदायको जीवनशैली जटिल अवस्थामा छ,’ स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएकी रानामगरले भनिन्, ‘खानपान अव्यवस्थित र कष्टपूर्ण छ । परम्परागत जीनशैली त्यागेर बाहिर आउन चाहेका छैनन् । यसरी रहने हो भने लोप हुन धेरै लाग्दैन ।’ उनीहरूको मौलिक पहिचान जोगाउन बृहत् दीर्घकालीन योजना बन्नुपर्ने उनले बताइन् ।
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राउटे समुदाय न्यूनतम मानव अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताइन् । ‘राउटे घुमन्ते समुदाय हुन् त्यसैले राज्यले आवास निर्माण गराएर स्थायी बसोबास गराउनु चुनौती छ,’ स्थलगत अनुगमनबारे अनुभव सुनाउँदै अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘काउन्सेलिङ गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउन सकिन्छ । उनीहरू आधुनिक समाजबाट प्रभावित भएका छन् । विस्तारै रूपान्तरण हुने देखिन्छ ।’ दुई युवतीमाथि भएको यौनहिंसाका दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीका अनुसार राउटे समुदायमा युवतीमाथि के भएको भन्ने बारेमासमेत थाहा छैन । उनले बस्तीलाई जानकारी नगराएरै युवतीहरूलाई न्याय दिन कानुनी प्रक्रिया थालिएको बताइन् । सामाजिक सुरक्षा बुझ्ने लोपोन्मुख फिरन्ते समुदाय राउटेको जनसंख्या १ सय ४६ मात्रै छन् । समुदायमा ७५ महिला र बालिका छन् ।
भत्तामा पुनर्विचार गर्न जरुरी : युवराज लुइँटेल
राउटेको परम्परागत जीवनशैलीमा केही फरकपन आएको छ । सय वर्ष, पचास वर्षअघि सामाजिक कानुन थियो होला । तर अहिलेचाहिँ राउटेहरूमा त्यस्तो कानुन रहेको प्रमाण बाहिर आएको छैन । त्यो भनेको मान्छेलाई जिउँदै मार्ने, गाडिदिने, भीरबाट झारिदिने भन्नेजस्तो परम्परागत मिथ सुनिन्थ्यो । उनीहरूको व्यवहारमा त्यो देखिँदैन ।
गत महिना दुई राउटे युवती दुर्व्यवहारमा परे । उनीहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै हिँडिराखेका, खाइराखेका, बाहिरी संसारसँग सम्पर्कमा रहेको फोटोहरू आइराखेका छन् । उनीहरू खुसी नै छन् । त्यो घटनाको बारेमा राउटे मुखियालाई मात्र होइन, अरूलाई पनि थाहा छ । घटना भएको केही दिनमा युट्युबरहरू छेउछाउमा गएर तिमीहरूको बस्तीमा यस्तो भयो नि थाहा छ कि छैन ? भनेर सोधेको, छलफल गरेको युट्युबहरू बाहिर आएको थियो । त्यसकारण त्यो समाजलाई ठ्याक्कै थाहै छैन भन्ने होइन थाहा छ । खुला रूपमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । निश्चित व्यक्तिलाई थाहा छ । त्यसकारण राउटेलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कुरा होइन ।
तर फेरि पनि कसैले निगरानी राख्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले अलिक छिटो ठाउँ छोडिरहेका छन् । एक ठाउँमा टिकेर बस्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको कारण बाहिर आएको छैन । तर बाहिर जो भनिन्छ, ती दुई युवतीको जिन्दगी जोखिममा छ । हामीले थाहा नपाई समाप्त पारिदिन्छ भन्ने त्योचाहिँ राउटेहरूप्रतिको नकारात्मक अफवाह मात्रै हो । व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । अन्य व्यवहारमा पनि देखिन्न । यसपालि पनि त्यो देखिएको छैन । घटनापछि प्रशासन राज्यबाट टाढा हुनेहरू निरन्तर प्रहरीको निगरानीमा हुनुपर्दा उनीहरूलाई दबाब महसुस भएको हुन सक्छ । पुलिसले छोड्छ कि भनेर चाँडो ठाउँ छाडेको हुन सक्छ । बर्खामास पनि छ । छानेको ठाउँ राम्रो भएन भने पनि अलिकति सुक्खा ठाउँ खोज्दै हिँड्नु परेको हुन सक्छ । उनीहरू प्रायः तीन महिनासम्म एकै ठाउँमा बस्छन् । अहिले त्यो घटना घटेपछि अलिक धेरै छिटो सरेका छन् ।
गोपनीयताका कारण चाँडै हिँडेको हुन सक्छ । तर हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलाजस्तो अहिलेको राउटे होइन । उनीहरू गाउँपालिका, नगरपालिकामा गएर आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राख्न सक्छन् । प्रहरी प्रशासनसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । त्यो घटनापछि विभागका तर्फबाट हामीले अनलाइनबाट छलफल राख्यौं । गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, एनजीओका प्रतिनिधि, स्थानीय गैरराउटे समुदाय, जानकारमाझ छलफल गर्‍यौं । त्यसबाट आएका कुरालाई लिएर मन्त्रालय र सरकारको नीति अध्ययन संस्थासँग बसेर राउट नीति निर्माण कार्यक्रम गर्नेछौं ।
खासगरी सरकारले दिँदै आएको भत्ताले उनीहरूको जिन्दगीमा धेरै असर गरेको देखियो । त्यसका बारेमा पुनरावलोकन र प्रतिबिम्बन गरेर वैकल्पिक उपाय केही हुन सक्छ कि भन्नेबारे छलफल गर्ने विभागको योजना छ । छलफलबाट केही विकल्प आएका छन् । पहिलो, अहिले जे छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो, उनीहरूले दस–बाह्र वर्षदेखि घुम्ने गरेको रुट पत्ता लगाएर ‘राउटे रुट’ भनेर घोषणा गर्ने र त्यहाँ अरू मानिसको प्रभाव रोक्ने । राउटे पूरै जंगलमा पनि बस्न सक्दैन, पूरै बस्तीमा पनि बस्न सक्दैन । पानीको स्रोत पनि चाहिन्छ । उनीहरू बगेको पानीमात्र खान्छन् । कुवाको जमेको पानी खाँदैनन् । सबै परिबन्द मिलाएर उनीहरूलाई उपयुक्त हुने मौसमअनुसारको अल्टिच्युट पनि मिलाएर ठूलो क्षेत्रलाई राउटे परिभ्रमण क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई संरक्षित रूपमा र बाहिरी प्रभाव नपर्ने गरी घुम्न दिन सकिन्छ ।
अर्कोचाहिं जीवित संग्रहालय बनाउने भन्ने छ । उनीहरूलाई ठूलो जंगलमा बस्न दिने । हाम्रो जस्तो घरजम गरेर बस्न भन्न मिल्दैन । ठूलो जंगलमा जस्तो जनावरलाई चिडियाघर बनाइन्छ । त्यहाँ जोकोही जान पाउँदैन । राउटेको ठूलो जंगलमा पनि अरू मान्छे जान पाउँदैन । उनीहरू आलोपालो गरेर, सिकार खेलेर, कन्दमूलहरू खाएर त्यहींको छिमेकी बस्तीहरूसँग आफ्नो काठको सामानहरू (कोसी) बेचेर जीविकोपार्जन गर्न सक्छ । अर्को राउटेले उत्पादन गरेको काठको सामान बनाउने सीप छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो भने त्यसबाट केही पैसा आउँछ । त्यसबाट राउटेको जीविकोपार्जन चल्छ भन्ने कुरा छ । तर अहिले सरकारले राउटेलाई पर्याप्त मात्रामा हेरिरहेको छ । कुनै गुनासो छैन मलाई । अहिले एक जना राउटे जन्मेपछि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पाउँछ । एउटा परिवारमा चार सदस्य भएमा महिनामा २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यो सानो रकम होइन, राउटेका लागि ।
प्रकाशित : असार २४, २०७८ १०:०६